Kadib Qalbi Jabkii Uu Markale Divock Origi Baday Tottenham-Maxay Ahaayeen Saddexdii Kalmadood Ee Uu Dareenkiisa Ku Cabiray? - Gool24.Net
Kadib Qalbi Jabkii Uu Markale Divock Origi Baday Tottenham-Maxay Ahaayeen Saddexdii Kalmadood Ee Uu Dareenkiisa Ku Cabiray?
Divock Origi ayaa si lama filaan ah u noqday mid ka mid ah ciyaartoyda ay jamaahiirta Liverool ugu jecel yihiin waqti xaadirkan kadib wixii ka soo sameeyay labadii kulan ee Champions League ugu danbeeyay.
Divock Origi ayaa inta badan xili ciyaareedkan ahaa mid kaydka ku caajisay isla markaana aan taageero badan ka haysan jamaahiirta kooxdiisa inkasta oo uu kulamo khaas ah magiciisa ku soo qoray, wuxuuna noqday Super Sub ama badalka sare ee uu Klopp ku soo badbaaday.
Kadib wixii uu ka soo sameeyay kulamadii Everton iyo Newcastle United ee Premier league waxaa magaca Divock Origi aduunka si buuxda u baray labadii gool ee uu Barcelona kaga cidhibtiray UEFA Champions League.
La’aanta Divock Origi suurtogal may noqoteen in ay maanta Liverpool markii lixaad ku guulaysatay UEFA Champions League waxayna kulankii Tottenham ka heleen goolkii labaad ee Spurs qalbi jabka ku abuuray isla markaana Reds guusha u xaqiijiyay.
BT Sport oo baahinta tooska ah ee UK ku haysta Champions league ayaa Divock Origi waydiiyay in uu markale sameeyay saamayntii kulankii Barcelona kadib wuxuuna adeegsaday saddex kalmadood.
Divock Origi ayaa yidhi: “We done it” oo uu kaga jawaabay in markale uu saamayn ku yeeshay kooxdiisa isla markaana ay qabteen shaqadii finalka Champions league.
Wariyaha ayaa Origi waydiiyay: “Divock, markale ayaad ayaad samaysay” Wuxuuna ugu jawaabay: “Waanu samaynay”. Wuxuuna wariyuhu tixraacayay guushii ay hore Liverpool uga soo gaadhay Barcelona ee goolashii uu dhaliyay iyo in uu markale gool ka dhalyay finalkii UCL.
Laakiin Divock Origi oo faraxsan ayaa hadalkiisa raaciyay: “Ugu horayn waxay ku saabsan tahay kooxda, laakiin anigu waxaan ku faraxsanahay in aan qaybtayda ka ciyaari karay”.
“Waad arkaysaa dhamaan taageerayaashaas oo dhan isla markaana waa maalin Liverpool khaas u ah” ayuu Origi hadalkiisa sii raaciyay.
Origi oo ka hadlaya waxa ay ula micno tahay in uu kooxdiisa Liverpool kula guulaystay koobka Champions League ayaa yidhi: “Waa wax aan la rumaysan karin. Ku guulaysiga Champions Leauge aad ayuu u adag yahay”.
Divock Origi ayaa si lama filaan ah u noqday geesiga jamaahiirta Liverpool waxayna tani keenaysaa in mustaqbalkiisii uu shakigu ku jiray ee Liverpool uu hadda meel saarmi doono.
Xili ciyaareedkii hore Divock Origi ayaa amaah ku soo qaaday Germany laakiin xili ciyaareedkan ayuu Klopp go’aansaday in uu kooxda ku sii hayo balse waqtigii ay kooxdiisu inta ugu badan u baahnayd ayuu la soo baxay wax aan hore looga baran.
Si kastaba ha ahaatee, Divock Origi ayaa saddex bartilmaameed oo uu goolka ku sameeyay waxa uu ku dhaliyay saddex gool oo Champions League ah waana labadii gool ee Barcelona iyo goolkii finalka UCL ee Tottenham.